Saraakiil ka tirsan milatariga Gaaboon oo afgambi ku dhawaaqay - Halbeeg News
Saraakiil ka tirsan milatariga Gaaboon oo afgambi ku dhawaaqay
LIBREBILLE (HALBEEG)- Ciidamada militariga ah ee wadanka Afrikada dhexe ku yaalla ee Gaaboon ayaa isku sheegay in ay xoog xukunka uga tuuraan madaxweynaha muddada xanuunka la ildaran ee Cali Boongo.
Qaar kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Gaaboon ayaa ku dhawaaqay afganbi milatari waxa ayna saakay la wareegeen xarunta Raadiyaha Qaranka Dalka Gaaboon iyagoo halkaasina ka sheegay in aynan ku qanacsaneyn xukunka madaxweynaha hadda dalka Marooko kaga soo kabanaya xanuunka loo Istarooga.
“Hadaljeedintii madaxweynaha ee sanadka cusub ayaa shaki weyn gelisay awoodda madaxweynuha uu u leeyahay gudashada waajibaadka loo xilsaaray” ayuu yiri Lieut Kelly Ondo Obiang oo isku magacaabay sarkaal ka tirsan ilaalada madaxtooyada ahna guddoomiyaha xoogagga difaaca iyo amniga wadaniyiinta Gaaboon .
Muuqaal baraha bulshada la isla dhexmarayay ayaa lagu arkay Lieut Kelly Ondo Obiang isaga oo ku sugan istuudiyo aqrinayana warbixin isaga oo ku labisnaa dharka ciidanka waxaana gadaashiisa taagnaa laba askari oo hubeysan.
Afhayeenka Madaxtooyada dalka Gaaboon, Ike Ngouoni oo la hadlay Wakaalladda Wararka AFP ayaa sheegay in Mdaaxweyne Cali Bongo uu si buuxda u soo bogsaday, isla markaana dhibaatadii caafimaadka ay haatan deysay..
Madaxweyne Cali Boongo waxa uu talada dalkaasi qabtay sannadkii 2009-kii, kadib, markii uu geeriyooday Aabihiisa, Omar Bongo oo talada dalkaasi hayey muddo 42-sanno ah. Waxaana Cali Boongo mar kale dib loo doortay Doorasho ka dhacday dalkaasi sannadkii 2016-kii, taasi oo dad badan lagu dilay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in la fashilayay isku daygii lagu doonayay in lagu afganbiyay Madaxweynaha dalka Gaaboon Cali Boongo.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in la xirxiray askartii sameeysay isku dayga afganbi.
Wixii warar ku soo kordho halkan ayaan idinkula soo wadaagi doonnaa.
Laba gacan ku dhiigle oo ka tirsanaa al-Shabaab oo xukun dil ah lagu fuliyay
Jubbaland oo hanti-dhowrihii ugu horreeyay xilka u dhaarisay